RMC AN'NY TAOZAVA-BAVENTY matihanina orinasa dia goavana mpanamboatra ny karazana rehetra sy ny kodia vy aluminium firaka kodia, fampidirana ny fampandrosoana sy ny famokarana miaraka. Ny vokatra lehibe indrindra ahitana ny vy tsy beadlock kodiarana, kodia vy beadlock sy tsy beadlock aluminium firaka kodia sy beadlock aluminium firaka kodia sy ny kodiarana, isika ihany koa dia afaka manome faritra maro isan-karazany sy ny fitaovana ho an'ny fiara.
Ny orinasa dia naorina teo an 2008, alohan'ny orinasa nanorina isika efa nanana tantara nandritra ny taona maro tao amin'ny kodia sy ny kodiarana indostria. Any amin'ny Ningbo City akaikin'i Shanghai, mety ananantsika ny rano, ny tany sy ny rivotra ny fitaterana.
Ny orinasa mpiara-miasa rehetra, ary mbola kely noho ny ezaka ny mpiasa manontolo, RMC olona niezaka ny hanatsara hatrany ny kalitaon'ny vokatra, ary niezaka hatrany hanatsarana ny ny Mpitantana orinasa fitsipika sy ny teknolojia hevitra. Ny famokarana fahaizany isan-taona dia ny 2 tapitrisa kodia.
Amin'izao fotoana izao, dia efa RMC aondrana any Amerika, Frantsa, Aostralia, Italia ary 20 hafa firenena sy ny faritra, ary koa, ny farany RMC manome hevitra ho an'ny mpanjifa ao Shina. Ny orinasa foana mifantoka amin'ny fikarohana, fampandrosoana sy ny zava-baovao, ka lasa maro ny vaovao roa beadlock kodiarana izay efa nivory tany amin'ny mpanjifa fiara Nissan Y60, Tundra, Jeep, Raptor, Jimny, Prado sy ny sisa, ary afaka mahita izany fiara any am- Gallery. Ary ny vokatra natao ny amin 'ny famolavolana ekipa isika dia maro kokoa hatrany manao endrika hihaona mpanjifa' Mitaky.
RMC no manomboka ny dingana faharoa ny paik'ady fampandrosoana. Ny orinasa momba "ny antonony vidin-javatra, ny fotoana sy ny famokarana mahomby tsara aorian'ny-varotra fanompoana" toy ny pinoany. Manantena izahay fa hiara-miasa amin'ny mpanjifa bebe kokoa ho an'ny fifanampiana fampandrosoana sy ny tombontsoa. Tsy mety mandray mpividy mba hifandray antsika.